अब काठमाण्डौमै पनि १० रुपैयाँमा पेटभरि खाना ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अब काठमाण्डौमै पनि १० रुपैयाँमा पेटभरि खाना !
अब काठमाण्डौमै पनि १० रुपैयाँमा पेटभरि खाना !
काठमाडौं , छोरो बिरामी भएपछि उदयपुरका टेकबहादुर बस्नेत काठमाडौं आएको दुई साता भयो। गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रलेउनका छोरा कुलदीपलाई चार दिनअघि पाटन अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्‍यो । आइतबार बिहान ११ बजेतिर खाना खान अस्पतालबाहिर निस्किए। बिरामी छोरालाई पनि खाना ल्याउन उनले हातमा ‘हटकेस’ बोकेका थिए ।
होटल जाँदै गर्दा एक युवाले सञ्चयकोष भवनको आँगनमा खाना खान बोलाए। उनी जाने कि नजाने अलमलमा परे। अनि सोध, ‘बिरामीलाई पनि खाना लैजान पाइन्छ रु’ खाना वितरणमा बसेका स्वयंसेवकले बिरामीलाई पनि लैजान दिने बताएपछि बस्नेत खाना खान अघि सरे।१० रुपैयाँमा एक टपरी खाना पाइन्छ तर प्याकिङ गरेर लैजान नपाइने व्यवस्थापकको नियम छ। १० रुपैयाँ तिरेपछि खाना खुवाउन खटिएका स्वयंसेवकले उनलाई टपरी हातमा थमाए। टपरीभरि खाना थापे ।
सस्तोको खाना भनेर नखाने पनि हुन्छन् । बच्चालाई मानवीयता र सहयोगको भावना सिकाउन सातामा एक पटक सस्तोमा खाना खुवाउन लागिएको लिम्बुले बताइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।